Hack | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့ ဒုတိယ ပစ်မှတ် မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်
မကြာသေးတဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်း ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်က ကွန်ပျူတာ အလုံးပေါင်း ၃ သိန်းကျော် ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက် မှုတွေ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ အတွက်ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ အာဏာ ပိုင်တွေလည်း အဲ့ဒီ ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှု အတွက် အလုပ်ရှုပ် နေခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဒုတိယ ပစ်မှတ်က မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်လို့ ABC သတင်း ဌာနက သတိပေး ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုဟာ မကြာတော့မဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ သာမန်လူတွေအသုံးပြုတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအထိတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ရဲ့ လုံခြုံမှုကို သတိထားဖို့ ပိုပြီးလိုအပ်လာပါတယ်။
ကဏ္ဍ Hack, နိုင်ငံတကာသတင်း
သင့် ဖုန်းထဲက App တွေကို Hack ပေးမယ့် Hack App Data
နာမည်လေး ကတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင် စားဖို့ ကောင်းပါ တယ်ဗျာ။ အခု Apk လေးကို
တော့ မကျွမ်း ကျင်တဲ့ User များ မသုံးစေ ချင်ပါဘူး။ ကလိလွန်ပြီး မိမိဖုန်းရဲ့ System ပိုင်းတွေ
မှာ ထိခိုက် သွားမှာ စိုးလို့ပါ။
အခု Apk လေး ကတော့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ Application တွေရဲ့ Data တွေကို Hack ပေးနိုင်
ဖို့ အတွက် ကူညီပေး ပါလိမ့်မယ်။ System ထဲမှာ ပါရှိပြီးသား Application တွေရဲ့ Data တွေထဲ
ကိုပါ ၀င်ရောက်ပြီး Edit လုပ်နိုင် ပါတယ်။
Application တွေရဲ့ Database ကို ၀င်ရောက် လေ့လာနိုင်တဲ့ သဘောပါ အခု Apk ကိုအသုံးပြု
ဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ ဖုန်းဟာ Root Access ဖြစ်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်ဗျာ။
အသေးစိတ် လေ့လာ ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ရေးထား ပါတယ်ဗျာ။
Android OS 2.3 နှင့် အထက် ဖုန်းများ မှာအသုံးပြု နိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
▼ play.google.com ▼ OR ▼ http://www.1mobile.com/hack-app-data-1396544.html ▼ OR ▼ userscloud.com ▼
ကဏ္ဍ Android, Hack, Phone Application
Android ဂိမ်းတွေ ကစားဖို့ ပိုက်ဆံ အလကား ထုတ်လို့ရတဲ့ SB Game Hacker v3.1 apk
SB Game Hacker v3.1 apk : 970 Kb
SB Game Hacker ဟာ ဂိမ်း တော်တော် များများ အတွက်ကို ပိုက်ဆံတွေ အလကား ထုတ်လို့ ရပါတယ် ...
Data နဲ့ ထည့် ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတွေ ကိုတော့ ရ မရ မသိပါဘူး..
ဒီကောင်ကို Run ပြီး ငွေထုတ်ချင်တဲ့ ဂိမ်းကိုရွေးပြီး အမြင်ဆုံး ငွေပမာဏ 9999999 အထိ ရိုက်ထည့်ပြီး
ထုတ်ယူလို့ ရပါတယ် ... ။
- နောက်ဆုံးထွက် v3.1 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ။
SBgameHacker is the most easy-to-use Android game modifying artifact. The fine is small, fast, green, free, no ads. The software to modify the game by modifying the memory data of the running game, money, blood, score, props, and the number of parameter values​​. Simple and practical, like how to change, how to change your game you call the shots!
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼ OR ▼ zippyshare.com ▼
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, December 22, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Game, Hack, Phone Application
UnHackMe 7.50 Build 450 | 16.86 MB
ကဏ္ဍ Hack, Internet, network, Security
Gmail and Facebook Hacking by Backtrack
External IP တူတဲ့ သူတွေ ဥပမာ အင်တာနက် ဆိုင်လိုနေရာမျိုး ၀ိုင်ဖိုင်တခုထဲကို ၀ိုင်းသုံးနေတဲ့ သူ တွေရဲ့
Gmail နဲ့ Facebook အကောင့်တွေကို BACKTRACK ကနေ ဟက်မဲ့ နည်းလမ်းတခု မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Hack တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကတော့ အများကြီးရှိမှာပါ အဲဒီထဲက တနည်းပေါ့ဗျာ
ပထမဦးဆုံ ကျနော်တို့ Backtrack ထဲမှာ ကိုယ်ရဲ့ Internal IP ကိုသိရအောင် Teaminal တခုဖွင့်ပြီး ifconfig
လို့ ရိုက်ပါမယ် ပုံမှာ ကျနော် Select ပြထားတာ ကျနော့် Internal IP ပါ အဲဒါလေးကို Select လုတ်ပီး Copy
ကျနော် တို့Social Engineer Toolkit ကိုသုံးပါမယ် နေရာက
BackTrack > Exploitation Tools >Social Engineering Tool > Social Engineering Toolkit > set
အဲဒါကို Terminal ထဲကပဲ တန်းခေါ်မယ် ဆိုရင် ပုံမှာလိုပါ cd /pentest/exploits/set ဆိုပြီး Enter ခေါက်လိုက်
ပါ နောက်တကြောင်းမှာက ./set ဆိုပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် Social Engineering Toolkit ကျလာပါမယ်
1)Social –Engineering Attacks စရွေးပါမယ် Enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်
2)Website Attack Vectors ကိုရွေးပါမယ် Enter
3)Credential Harvester Attack Method ကိုထက်ရွေးပါမယ် Enter
2)Site Cloner ကို ရွေးပါမယ် Enter ခေါက်လိုက်ရင်
IP address for the POST back in Harvester/Tabnabbling: ရဲနောက်မှာ စောစော က Copy လုပ်ထားတဲ့
ကျနော်တို့ IP Address ကို Paste လုပ်လိုက်ပါ ကျနော် Select ပေးထားတာ ကျနော် IP ပါ ပုံမှာလိုပါ ပြီးရင်
Enter the url to clone: ဆိုတာရနောက်မှာ ကိုယ် ဟက်မဲ့ ဆိုဒ်ရဲ့ လိပ်စာကိုထဲ့ပေးပါမယ် ပုံ ကိုကြည့်ပါ Gmail ဆို
လဲ http://www.gmail.com/ ပေါ့ Facebook ဆိုတော့ http://www.facebook.com/ ဆိုပီးရိုက်ထဲ့လိုက်ပါ ပီးရင်
ခဏနေရင် ရင် ပုံ မှာလို Press <return> to continue လို့ ပေါ်လာရင် Enter ခေါက်လိုက်ရင်
ခုလို ပေါ်လာရင် ကျနော်တို့ Setting ချတာပြီးပါပြီ ကျနော်တို့ ခဏ Hide လုပ်ထားလို့ ရပါပြီတကယ်လို့ VMware
ထဲ သုံးနေတာဆိုရင် VMware ထဲမှာ မဟုတ်ပဲ အပြင် က Browser တခုဖွင့်ပြီး Address ဘားထဲမှာ ကျနော်တို့
စောစောကူးထားတဲ့ IP ကိုရိုက်ထဲ့ ကြည့်ပီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် Facebook Log in ၀င်ဖို့ Page ပေါ်လာမှာဗျ
အဲမှာ Log in ၀င်လိုက်တာနဲ့ စောစော ကျနော်တို့ Setting ချခဲ့တဲ့ Social Engineering Toolkit ထဲမှာဝင်နေပြီ
ဒါကတော့ ကျနော် ရောက်နေတဲ့ နေရာ က ကျနော့် IP နဲ့ အနေ အထားပေါ့ဗျာ ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့ ဗမာလို
ပေါ်ဘူးဗျ eng လိုပေါ်မှာပေါ့
ကဲ... ပြန်ဆက်မယ်ဗျာ ကျနော်တို့ ဟက်မဲ့ သူကို http://192.168.80.129/ ဆိုပြီး အဲဒီတော့ ဒီတိုင်းကြီး ပေး
လိုက်ရင်တော့ ရပြီဗျ ကိုယ်ပေးမဲ့လင့် က IP နံပါတ် ကြီးပေါ်နေတော့ သိပ် မမိုက်သေးဘူးဗျ အဲဒီတော့ IP နဲ့
url တခု လုပ်မယ်ဗျာ ကိုယ်ပေးမဲ့လင့် မှာ Ip ပျောက်သွားအောင် Browser တခုဖွင့်လိုက် ကျနော်တို့http://
tinyurl.com/ ကိုသွားမယ်ဗျာ ဒီထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စောစောက IP ကိုထဲ့ပြီး Make TinyURL လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ ။
ဒါဆို ပြထားတဲ့ Select ပေးထားသလို နံပါတ်တွေ ပျောက်ပြီး လင့်လေးပေးလိုက်မယ်ဆို အမြင်နဲနဲ တော်သွား
ပြီပေါ့ဗျာ အဲဒီတော့မှ အဲဒီလင့်လေး ကို ကူးထားလိုက်ပြီး ကိုယ့် Network ထဲက သူတွေကို အယုံသွင်းပြီးပေး
လိုက်ပေါ့ဗျာ ဂျီတော့ ချက်ဘောက် ထဲက ပေးလိုက် မယ် Facebook မှာ ချက်နေရင်း နဲ့ ပေးမယ် ဒါမှ မဟုတ်
Email ကို လှမ်းပို့ ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင်
သူ က အဲဒီ လင့်ကို ၀င်တာနဲ့ Facebook Log in ကို ရောက်သွားမယ် ၀င်လိုက်တာနဲ့ စောစောက Setting ချ
ထားတဲ့ Social Engineering Toolkit ထဲမှာ ခုလို Log in ၀င်လိုက်တဲ့ Mail နဲ့ Password တွေ ပေါ်လာမှာပါ
Credit to www.itgroupmyanmar.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, October 03, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Facebook, Google, Hack, နည်းပညာ
Facebook ကို ဒီလိုဟက်တာပါ (ပုံနှင့်တကွ ရှင်းပြပေးထားသည်)
ဒီနည်းလေး ကတော့ hack မဲ့ အကောင့်ဟာ 24 hour မသုံးတဲ့ အကောင့်တွေ မှ လုပ်လို့ ရတာပါ...
ဒီနည်းကို သိပြီးသားသူတွေလဲ ရှိမှာ ပါ ...
1) ပထမဆုံး ကိုယ်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ Facebook Account ကို သွားပြီး Address bar ကနေ ID ကို ကော်ပီ ကူး
In this Example: https://www.facebook.com/whereheart8
whereheart8 က ID ပါ ဂဏန်းတွေလဲ ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ် ဘာဖြစ်နေနေ အဲဒီနေရာက ဟာ ပါပဲ
2) သင့် ဖွဘုတ်ကနေ Logout လုပ်လိုက်ပါ နောက် click Forgot your Password? ကိုနှိပ်ပါ
3) Find Your Account မှာ သင့်ပစ်မှတ်ကို ရှာပါ
In this Example: whereheart8@facebook.com
4) နောက် No Longer have access to these ကိုနှိပ်ပါ
5) အင်း ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောစရာရှိတယ် ဘာလဲဆိုတော့သင့်ဆီမှာ ဖွဘုတ်နဲ့ လုံးဝအဆက်အသွယ်မလုပ်
ထားတဲ့ အကောင့် တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ် ကောင်းတာကတော့ အကောင့် အသစ်တစ်ခု လုပ်လိုက်ပေါ့ အီးမေး
အသစ်ကိုထည့် ပြီး Continue ကိုနှိပ်ပါ
6) Security Question Answer ဒီနေရာမှာတော့ သင့်မှာ ဟက်ကင်း လုပ်ဖို့ ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်တွေ ဘယ်
လောက်များလဲဆိုတာ အပေါ်မူတည်လာပါတယ် အဲလိုပြောရင် ရိုင်းနေမယ်နော် အခြေခံ ဗဟုသုတ ဘယ်
လောက်များများ ရှိသလဲပေါ့ဗျာ နော် နားဝင် မဆိုးတော့ဘူးပေါ့
7) အဲဒါပြီးရင်တော့ Password အသစ်လုပ်ပြီး confirm လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်ပါပြီ ဒါကလဲ သင့်အီးမေးလ်ဆီ ပို့ထား
ပြီးသားပါ အတည်ပြုပေးလိုက်ပေါ့ ပြီးနေပြီလေ ခက်သလားဗျာ
Note: အရေးကြီးတာကတော့ စီကျူ ရတီမေးခွန်းဖြေဖို့ ပဲ ရနိုင်တဲ့ နည်းတွေပြောပေးပါမယ်
Fake Facebook Account တစ်ခုဖန်တီးပါ
ပစ်မှတ်ကို invite လုပ်ပါ
နောက် သူ့စီကျူရတီမေးခွန်းကို သူ့ကို မေးကြည့်ပါ
ဟိဟိ ဒီနည်းက ဟိုးအရင် ၂၀၁၀ လောက်က သုံးခဲ့တဲ့နည်းပါ အခုရမရမသိတော့ပါ အခုနည်းသစ်တွေက အဲလိုမဟုတ်တော့ဘူးလေ စမ်းကြည့်ဦးပေါ့ ရရင် အမြတ်ပဲလေနော်
Credit : အာကာဖြိုး (နည်းပညာ)
ကဏ္ဍ Facebook, Hack
Wifi Password တွေကို 95% အမှန်အကန် Hack ပေးနိုင်တဲ့ WIBR+ WIfi BRuteforce Hack APK
အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ ကျွန်တော့် ဆရာသမားလည်းဖြစ် ဆေးထိုးဖော်လည်းဖြစ် တဲ့ အိုင်တီ
မုဆိုးပေးတဲ့ Application လေးဖြစ်ပါတယ်။ Hacker ကြီး သုံးနေတဲ့ Application ဆိုတော့ နယ်နယ် ရရတော့ မဟုတ်
ကျွန်တော်ကလည်း ရရချင်း စမ်းသပ် ကလိနေတုန်းပါဘဲ။ အခု Application နဲ့ ရခဲ့ဖူးတဲံ့ Wifi Password တွေရှိတယ်လို့
Hacker ကြီးကပြော ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Wifi တွေရှိတဲ့ ဘော်ဒါများက ဒေါင်းယူ ထားသင့်ပါတယ်ဗျာ။
တစ်ခုတော့ ကြိုပြီးပြော ပါရစေနော် Hacking ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလိချင် သူများ ကလိနိုင်
ပါပြီဗျာ။ File Size ကလည်း 146KB လေးဘဲ ရှိလို့ လွယ်ကူ စွာ ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ သူက Wifi Signal Strength
အနည်းဆုံး 50 ရှိမှ Hack ပေးနိုင်မှာပါ။
ဒီကောင်လေး ကိုအသုံးပြီး Hack နေတဲ့ အတွက် Phone ကိုမထိ ခိုက်စေပါဘူး။ Android OS 4.0 နှင့် အထက်ဖုန်းများ
မှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ အခု Application လေးအကြောင်း သိချင်ရင် တော့ ကျွန်တော့် ဆရာ အိုင်တီမုဆိုး
ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာတွေကို ဦးနှောက် သုံးပြီး Hack ကြတာပေါ့ဗျာ။